Ndụmọdụ iji GPS Tracker jide otu Onye Mmekọ Ndụ Na-adịghị Eme Ihe Eziokwu | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Ndụmọdụ iji GPS Tracker jide otu Onye Mmekọ Ndụ Na-adịghị Eme Ihe Eziokwu
Idkpa oke n'alụ di na nwunye ma ọ bụ mmekọrịta bụ ihe a na-ahụkarị taa. N'ime ụwa, onye ọ bụla nwere ike ịbụ onye e merụrụ ahụ, gụnyere ndị ama ama, ndị egwuregwu, na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ na ndị ọgaranya na ndị mara mma si n'akụkụ niile nke ụwa enweghị ike idobe mmekọrịta ha hụrụ n'anya, keduzi ohere anyị nwere? O yiri ka ịlụ di na nwunye na-alụwanye ọgụ na-emebi emebi na akụkụ abụọ ahụ, si otú a bụrụ ihe na-akpata nsogbu. N'ọnọdụ a, nwunye amalitela ịghọta na ejighị ya kpọrọ ihe, ebe ọ bụ di ga-amụ nwa na-achọghị ịlaghachi n'ụlọ. Suchdị okwu a na-amalite imepụta oke nsogbu ma na-amanye nwunye ya inweta nkasi obi na onye ọzọ. Ọ bụ ọnọdụ dị mma ebe alụmdi na nwunye mara mma na-amalite ịda n'okpuru. Eziokwu na-ezighi ezi dị n’etiti ọtụtụ mmekọrịta ogologo oge na enwere ndakpọ olileanya na ọnwụnwa ndị na-eduga di gị ma ọ bụ nwunye gị n'ihe omume ibibi ndụ gị kpamkpam.
Y’oburu na nwunye gi n’enweghi nkwanye ugwu ma na acho uzo isi gosiputa enyo gi o gha eziri ezi, mgbe ahu ino na ebe ị ga - enweta ozi gi bara uru banyere GPS Tracker, nke g’enyere gi aka na-enyocha ọnọdụ nke ndị ọcha gị wee lọghachikwute gị iji kọwaa ebe ọ nọ na ihe ọ na-eme ugbu a. Enweghị nchekasị! N’oge a, ọtụtụ ngwa ọrụ ọhụụ na - ewebata kwa ụbọchị, nke na - eme ka ndụ dịtụ mma karịa ka ọ dị na ndụ gara aga mgbe ndị mmadụ enweghị ngwaọrụ zuru oke iji. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche ihe ọ bụla echere ma tụọ ụjọ na ịchọta ụzọ tupu onye gị na ya ga-emebi ndụ gị kpamkpam.
Ọ Dị Mma irechọpụta Onwe Onye Nke Gị?
Ee, ị nwere nhọrọ ị were were onye ọrụ ga - arụ ọrụ maka gị na ịchọta ebe ị ga - akpọkọta ozi gbasara nwunye gị nke na - achọ ịghọ aghụghọ ma ọ bụ na - eche echiche gị. Agbanyeghị na onye na-achọpụta ihe nzuzo bụ nhọrọ kachasị mma, ịnwere ike iji ụdị teknụzụ ọ bụla rụọ ọrụ niile ma nwee ike ịchọpụta otu ozi na-akọghị ego zuru ezu na iwere onye ọrụ nchọpụta ma ọ bụ PI ugbu a, ọ ga-ekwe omume soro ọnọdụ nke onye na-eji obere. Ngwaọrụ ngwanrọ ọgbara ọhụrụ na-eji satellites ndị agha iji chọta saịtị nke mmadụ. Tupu ịga n’ihu, ịmara na e nwere ụdị GPS nkeji abụọ, dịka:
Gịnị bụ GPS Logger, oleekwa otu m ga-esi jiri ya?
Ideringtụle na ọ bụ ụdị ihe ndekọ vidiyo na-edekọ ọsọ ọga nke onye ọlụlụ gara, ọnọdụ ya na oge niile ejiri nọrọ ebe ahụ na ihe ndị ọzọ. Y’oburu n’icho ibi ebe ibe gi na etinye oge a, ngwa a puru inyere gi aka n’enweghi obi abua. Kpọrọ ihe, ọ bụ ọrụ amamiihe na-eme ka ị na-achọpụta na nwunye gị bụ onye eziokwu ma ọ bụ dịka ebe ọ nọ. Chegodi, ọ bụrụ na nwunye gị na-anọ n'ụlọ ma ọ bụ zute ya n'ụlọ nkwari akụ, mgbe ahụ jiri ngwa a, ị ga-egosipụta hoo haa ebe ọ nọrọ kemgbe na ogologo oge. Na nha, ngwaọrụ ahụ pere mpe ma enwere ike idowe ya ebe ọ bụla ịchọrọ. Iji mee nke a, ịkwesịrị itinye ngwaọrụ a na ebumnuche gị ma ọ bụ n'ụgbọ gị. Mgbe ọ bụla ị dịla njikere ilele ozi ahụ ngwaọrụ ahụ chikọtara, wepụ ya ma ọ bụ banye n'ụgbọ ala ma fanye ya na PC gị iji budata ozi ahụ ngwaọrụ anakọtara maka gị. N'iji onyonyo satịlaịtị, ngwaọrụ ga-egosi ụzọ niile achọrọ kpuchie ya n'ụdị ederede.
Gịnị bụ GPS oge, yana kedu usoro iji ya?
Ọ bụ ụdị nke Logger GPS dị elu ọ ga - eme ka ị hụ ozi anakọtara na ozugbo ma na weebụsaịtị, enyo, ma ọ bụ ekwentị. Can nwere ike jiri ngwa ọrụ a wee chọta ebe dị iche iche nke onye gị na ya bi iji gosi na ya ekwesịghị ntụkwasị obi. Ọ bụ ezie na Logger GPS enweghị ụgwọ kwa ọnwa, ị ga-akwụ ndenye aha maka ọrụ a n'ihi na ọ na-enye data niile na ezigbo oge na iji netwọtị mkpanaka ziri ezi. Anyị anaghị ekwu maka ngwaọrụ niile, na ụdị ngwaọrụ ndị ahụ pere mpe n'ọnụ ọgụgụ na-arịọ gị ka ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ọnwa kwa ọnwa.
Ndekọ olu na GPS Ndepụta Sistem
Iji kpochapụ nchegbu gị, anyị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ga-enyere gị aka ịchọta ihe nzuzo dị n'azụ ebe ahụ. Eeh, oburu na nwunye gi ghuru gi n’enweghi oge, inwere ike ichota ngwa ngwa ebe a site na iji otutu ngwa oru. Ngwá ọrụ ụfọdụ bụ:
Nyocha Voice Recorder
Ekwentị GPS Ndepụta
Obere Ndekọ Olu Obere
Ndekọ olu olu Pen
Better mara nke ọma ụdị ngwá ọrụ ọ dị mkpa ka ị gaa ledoo nwunye gị, ebe ọ gara, yana onye ọ na-ezute. Ozugbo ịchọpụtara, a ga-azọpụta ndụ gị ka ị ghara imebi. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ịzụta ụdị ngwa a, ị ga-eleta OMG-Solutions.com otu mgbe site na isoro njikọ a ka ị ga - eji aka gị abụọ mezuo aka gị.
Uru na ọghọm nke GPS Ndepụta Sistem
Might nwere ike ịma banyere uru GPS Tracking Sistem, na mbụ ọ ga - akọ akụkọ ọnọdụ nke onye ahụ echedo n'agbanyeghị isi nkuku okporo ụzọ ha na - eguzo. O yiri ka ọ gaghị eme ka ị mata ihe onye ọlụlụ ma ọ bụ otu onye na - eme, ọ bụrụ na nwunye gị na nwoke ọzọ na - emekọrịta ihe ọ bụla na ọ ga - abụ na - abịaghị n'oge n'ihi ọtụtụ ọrụ ga - adịgide. Enwere ozi ọma maka ndị di dị otú a na ụfọdụ GPS sistemụ nsuso na-abịa na igwe okwu na mgbe ị nwetasịrị ngwá ọrụ ị ga-arụ ọrụ siri ike nke ịmebisị pọọsụ nwunye gị n'oge na-adịghị anya tupu ime ka ọ mara.
N'ihi ụfọdụ okwu dị oke egwu, ọ bụrụ na ndị ahịa GPS enweghị ike ịrụ ọrụ, yabụ ịchọrọ ezumike, chee ihe osisi gị na-esote. Kwụsị! Onwere ihe g’eme ka iji igwe eji ekwu okwu, ihe ndi nlere ma obu igwefoto nchoputa gosiputara na nwunye gi na aghugho gi. Site na ụdị ụdị ngwaọrụ a, ịnwere ike ịnweta ozi ịntanetị niile, ndekọ ekwentị, metadata na oku, ozi ozugbo na Skype na ndị ọzọ.
Nzuzo 5741 4 Echiche Taa
Onye GPS Tracker Nwere ike Inweta Enweta Onye Mmekọ A Na-ekwesịghị Ntụkwasị Obi?
Etu ị ga - esi chọta GPS Tracker na ụgbọ ala gị na Nzuzo 5
Ifyingchọpụta onye ndu GPS Tracker maka Onye nwere…
Họrọ ezigbo Tracker maka nwa gị nwere Autism
Ingzụlite Nwa na Autism - Họrọ GPS kacha mma…